स्मार्ट हीटिंग - नेटटमोसँग - स्मार्टमेटर स्टार्टर किट
नेटटमो स्वागत छ - होमकिट सुरक्षित भिडियो क्यामेरा समीक्षा!
क्यामेराकन्फिगरगर्नुहोस्, होम क्यामेरा, netatmo, नेटटमो स्वागत छ
मसँग अहिलेसम्म कुनै गृह क्यामेरा समीक्षा गर्ने मौका छैन। जे होस्, तपाईं माइकको समीक्षामा अकरा जी २ को बारेमा स्मार्टमीमा पढ्न सक्नुहुनेछ। नेटटमो वेलकम पहिलो क्यामेरा हो मैले परीक्षण गर्ने अवसर पाएँ। र यससँग तथ्य छ कि ...
स्मार्ट अफिस २०२० - १२ उत्पादनहरू जुन यससँग मद्दत गर्दछ
Aqar, Bobot, dgm, netatmo, फिलिप्स, roborock, स्मार्ट अफिस, Xiaomi
प्रत्येक दिन हामी तपाइँलाई स्मार्टमेमा देखाउछौं कि घरको अर्को तत्वहरू स्मार्ट हुन सक्छ। तर घर मात्र होईन। स्मार्ट कारहरू, शहरहरू र कार्यालयहरू। र म आज अन्तिममा फोकस गर्न चाहन्छु, अर्थात् विशेषता के हो ...
नेटटमोले आधिकारिक रूपमा होमकिट सुरक्षित भिडियो समर्थन गर्दछ
homekit, होमकिट सुरक्षित भिडियो, netatmo
नेटटामो क्यामेराका लागि महत्वपूर्ण दिन आएको छ। आज देखि तिनीहरूले आधिकारिक रूपमा HomeKit सुरक्षित भिडियो समर्थन गर्दछन्! क्यामेरा अपडेट आउँदो दिनमा अर्को ग्राहकहरुमा प्रवाहित हुनेछ। यसको मतलब यो हो कि दुबै नयाँ र प्रयोग गरिएको नेटटमो क्यामेरा ...